Hamro Kantipur | सकभर काठमाडौं नआउन सरकारको आग्रह सकभर काठमाडौं नआउन सरकारको आग्रह
सकभर काठमाडौं नआउन सरकारको आग्रह
काठमाडौं, उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं नआउन अपिल गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर बढिरहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सकभर काठमाडौं नआउनुहुन र आउनै पर्ने अवस्था भए जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै आउन अनुरोध गर्दछौं ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले शनिबार प्रेस ब्रीफिङमा बताए अनुसार मुलुकभर २ हजार १ सय २० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये काठमाडौंका मात्रै झन्डै आधा १ हजार १ जना छन् । यस्तै, उपत्यकाको ललितपुरमा १ सय ९ र भक्तपुरमा ६७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार ३ सय २ छ । कुल संक्रमितको सख्ंया भने ८४ हजार ५ सय ७० पुगेको छ । यीमध्ये ६२ हजार ७ सय ४० जना निको भएका छन् । शनिबार २ हजार ४४ जना संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणमुक्त हुने दर ७४.१ प्रतिशत छ ।